Data Shredder - Mee ehichapụ data unrecoverable
> Resource> Utility> irè iji Mee ehichapụ Data Unrecoverable
Irè Way Mee ehichapụ Data Unrecoverable
Kọmputa arụ a ọzọ na ndị ọzọ ọrụ dị mkpa ná ndụ anyị n'oge. Anyị na-arụ ọrụ na ya, zụọ ahịa na ya, na-ekwurịta okwu enyi na site na ya, ụtọ na ya na ndị ọzọ. Kọmputa maara ọzọ na ndị ọzọ banyere anyị, ozi anyị na-achọ ịkọrọ na nzuzo anyị adịghị chọrọ ịbụ ọha. N'ozuzu anyị họrọ ihichapụ ozi na anyị ịhapụ, na efu nke egweri biini mgbe anyị na-akpọ ọmụma nzuzo, na anyị na-eche na ọ dị mma.
N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị. Ehichapụ data bụ n'ezie a ụdị zoro data mgbe ọ na-abịa na kọmputa. Anyị nwere ike ghara ihichapụ ọ bụla data kpamkpam nke na kọmputa. The disk dị nnọọ na-agwa gị na ohere bụ reusable mgbe ị ihichapụ ihe ụfọdụ, ma data ka na-emi odude ebe. The irè n'ụzọ iji mee ka ehichapụ data unrecoverable bụ ịhọrọ a data shredder, nke nwere ike ihichapu data na-adịgide adịgide na irretrievably. Wondershare WinSuite 2012 Dị otú ahụ a ngwá ọrụ iji shred data ruo mgbe ebighị ebi.
Ịzụta Wondershare WinSuite 2012 ebe a
30 Days Ego Back nkwa
Ugbu a, na-eso nzọụkwụ n'okpuru na-eme ihe dị gị mkpa.
Wụnye na ẹkedori ya na kọmputa gị, mgbe ahụ, na-aga "Nzuzo & Nche", na-ahọrọ "Njikwa Shredder", nke nwere ike hichaa data na ihe fọdụrụnụ.
Mgbe abanye File Shredder, gị na mkpa iji tinye gị na-achọghị mwute data na faịlụ, ma ọ bụ nchekwa. Mgbe ahụ shred ha na otu click iji gbochie ha si na-natara ma ọ bụ zuru. Nke a osobo US agha data nchebe chọrọ.
Nke a data nchicha-enye gị ohere shred iche iche iche iche nke faịlụ, dị ka ụlọ ọrụ akwụkwọ, foto, videos, PDF faịlụ, na ndị ọzọ. Ọ bụ nnọọ mfe iji na maka kọmputa ọkachamara na beginners. Naanị ihe ị mkpa iji gosi bụ na faịlụ ị gbakwunye bụ n'ezie onye ị chọrọ shred. N'ihi na ozugbo faịlụ a shredded, e nweghị ngwá ọrụ n'ụwa nwere ike weghachite ha azụ. Ọ bụrụ na e nwere otu ị kwukwara na-ezighị, ị nwere ike wepụ ya site shred na-abụ ndepụta site ị na-ahọrọ ọ na ọkụkụ Wepụ Site List. Mgbe ahụ ọ ga-laghachiri gị na kọmputa.
Nke a bụ nanị otu akụkụ nke ọrụ ahụ nke Wondershare WinSuite 2012 nwere ike ime. Ọ bụrụ na ị chọrọ encrypt gị faịlụ, ọcha nchọgharị gị kuki, akụkọ ihe mere eme, na-adịbeghị anya URL, index faịlụ, wdg a data wiper nwere ike ime ihe ndị a niile n'ihi na ị na-ozi nkeonwe gị mma.
Ihichapu Your mmetuta nchekwa-adịgide adịgide na nchekwa Shredder
Gịnị Bụ Solaris na iji mee Disk Formatting on Solaris
Ihe niile banyere Disk Format na Format Disk
Gmail Paswọdu Finder: Sinụ Back Your Gmail Paswọdu
Olee otú Idozi Tcpip.sys Blue ihuenyo Error
Olee otú Idozi ghara ịdị irè nkebi Isiokwu
Olee otú Idozi Disk buut Failure Fanye System Disk
Olee otú reinstall Internet Explorer 9/8/7